Woyyaaneen tooftaa jijijjiirataa umrii akka dheereffattuuf hayyamamuu hin qabu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woyyaaneen tooftaa jijijjiirataa umrii akka dheereffattuuf hayyamamuu hin qabu
Woyyaaneen tooftaa jijijjiirataa umrii akka dheereffattuuf hayyamamuu hin qabu
Qabsoon Oromoo Woyyaanee madeesseera. Hin ajjeesne garuu. Woyyaaneen du’uu dhabuun isii jiraachuuf akka tattaafattu isii godheera. Woyyaaneen tattaafatti, xurree du’aa irraa isii hanbisu argachuuf dhamaati. Laaftus nuuf raftee akka bulaa hin jirre ifa. Kan hirriba isii dhoorgaa jiru sochii Oromooti. Sochii Oromoon humna Woyyanee ol ta’aa dhufeera. ta’us ammas Woyyaaneen harka kennachuu irraa fagoo jirti. Sochii Oromoon wolqabatee raajiin Woyyaanee mudate bulchiinsi Lammaa Magarsaa ajajaa fi too’annaa Woyyaanee keessaa bayuuf wixxiffachuu eegluu isaati. OPDO’n ni dammaqxi, tankaarfii kana fakkaatu ni fudhatu jettee hin eegne, ittis hin qophoofne. Gareen Lammaa finciluun ifa. Ganduu Andargaachoos yeroo addaddaatti mallattoo argisiisee jira. Kuni hundi dhimma Woyyaaneen akka salphatti bira darbanii miti.
Woyyaaneen OPDO osoo hin qabanne Oromiyaa saamuu fi Oromoo jilbiiffachiisuun akka hin danda’amne beekti. Sa’aa kanatti gaafiin Abbaay Xahaayyee, Daratsiyoon, Monjoriinoon fi kittillayyoonni Woyyaanee hundi wolgaafataa jiran tooftaa kamiin bulchiinsa Lammaa Magarsaa harkatti deeffan isa jedhuudha. Garee Lammaa harkatti galfachuu irrati mikooftii? Ammatti wanti kuni ifa miti. Garuu, Woyyaaneen gare kana uf jalatti deebisuudhaaf na gargaara tooftaa jettu hunda (ifaa fi dhoksan) lafa kayattee irratti hojjataa jirti. Bulchiinsa Lammaa kuffisuuf shirri xaxama, sakaalanii kuffisuuf halkan guyyaa Maqalee fi Finfinnetti hojjatama. Ijoo isaanii mee haa ilaallu.
1. Kallattii hundaan (daangaa fi keessaan) woraana Oromiyaa irratti kan labse Woyyaaneedha. Hanga amatti woranni kuni Oromoo tokkoomse malee akka isan yaadan kan Oromoo fi bulchiinsa Lammaa gargar baasu hin taane. Haalli kuni gara funduratti hin jijjiramu jechuun ammaoo hin danda’amu. Kan guyyaa guyyatti dhangala’aa jiru dhiiga Oormooti. Kuni saba keenna daran dallansiisuu fi garee Lammaa irratti kakkasuu mala. Kuni ta’uun Woyyaaneef injifannoo guddaadha. Kuni akka ta’uuf hayyamuu hin qabnu.
2. Dhaabotaa fi namoota sadarkaa Itoophiyaa fi ADWUI’tti bulchiinsa Lammaaf deeggarsa laatuu danda’an jedhanii amanan rukutuun shira Woyyaanee isa biraati. Akkuma beekamu Lammaa fi Gadduu Andaargaachoo wolitti dhufeenya Oromoo fi Amaaraa (OPDO fi ANDM) daran cimsuuf tankaarfii abdachiisaa fudhachuu eegalaniiru. Kuni nama hedu gammachiisus, Woyyaanee baay’ee rifachiise, dallansiise. Tankaarfii akka fudhataniif isaan kakaase. Koree hoji raawwachiiftuu ADWUI keessatti Lammaa Magarsaa kophaa hanbisuuf jecha Woyyaaneen Gadduu Andaargaachoo dhabamsiisuudhaaf hujii bal’aa eegalteerti. Woyyaaneen Gadduu bakkaa kaasnaan kan dhufutu gara Lammaa Magarsaa fi Abiyyi faa dhabamsiisuutti. Gaadduu ari’amuu fi ANDM dadhabuun rakkoon isaa waan naannoo Amaaraa fi ANDM keessatti qofa wan daangeffamuu miti. Gadduu booda gara Lammaa fi Oromiyaatti dhufuun isaanii shakkii hin qabu. Kuni akka hin taaneef Gadduu akka aangoo irra turuuf hundi keenna waan danda’amu hunda godhuu qabna. ADWUI/EPRDF keessaan dadhabsiisuudhaaf ADWUI keessatti garee Lammaa deeggaru argachuun barbaachisaadha. yeroo darbe labsiin yeroo hatattamaa inni lammafaa kan kufeef woldhageettii gare Lammaa fi #GareeGaaduun ta’uu isaatu himama. Osoo arginu Gidaarri #GareeLammaa balaa irraa ittisuu malu jiguu hin qabu.
3. OPDO fi ANDM jaarmaya ADWUI/EPRDF keessatti miseensaa fi saba gurguddaa qabatanii dhiibaa Woyyaanee jala woggaa 26 oliif turan. Rakkoo kana keessa bayuuf Lammaa fi Gadduun yaalii abdachiisaa eegalaniiru. Wanti kana caalaa Woyyaanee dhibamsiisaa jiru hin jiru. Ol’antumama OPDO fi ANDM miseensotaan qaban cabsuuf jecha Woyyaaneen yadaa harawan gadi baatee jirti. Kunis OPDO, ANDM, TPLF waan jedhu dhiisnee (hundi walitti baqee) dhaaba siyaasaa tokko ijaaruu qabna waan jedhu. yeroo ol’antummaan TPLF shakki keessa hin tennetti kuni akka ta’uuf hayyamaa hin turre. Amma garuu OPDO fi ANDM cimaa dhufuun gara dhaabbilee kanniin ballesuuf shira xaxuutti seenaniiru. Yaada kanarratti cimanii hojjataa jiru. Ammatti kuni Woyyaneenf malee eennuufuu faydaa hin qabu. Haala ADWUI’n ittiin ijaarame jijjiruudhaan ol’aantumma aisii tikfachuu barbaaddi Woyyaaneen. Namoonni OPDO fi ANDM deeggruu fi mormus kuni akka ta’uuf hayyamuu hin qabu. Kuni ta’uun Woyyaneen umrii akka dheereffattuuf hayyamuudha.
Dhimmi wolitti baqauu kuni (OPDO, ADND, TPLF balleessanii dhaaba tokko uumuu) gaafii fi fedhii dhaabbilee kanniin irraa madduu qaba malee waan Dabratsiyoonii fi Monjoriinoon OPDO fi ANDM irratti fe’anii ta’uu hin qabu. Keesattuu yeroo OPDO fi ANDM mallattoo finciluu argisiisaa jirutti jaarmaya tokko uumuun faaydaan isaa eenuufuu miti: faaydaan isaa TPLF qofaaf. Kanaf hanga rakoon woggaa 26 furamu, federaalizimiin hujii irra ooluu fi ol’antummaan Woyyaanee boolla seenutti waa’een jaarmaya siyaasaa tokko uumuu akka dhugoomuuf bulchiinsi Lammaa Magarsaa fi Gadduu Andaargaachoo hayyamuu hin qaban. Nutis kuni akka hin tanaeef dhiibbaa barbaachisu hunda godhuu qabana.
Previous articleWoyyaaneen mosajjii PSS jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii Oromoo basaasuudhaaf dhama’aa turuun isii beekame
Next articleSiyaasni ADWUI bulluqaara; Miseensonni paarlaamaa OPDO fi ANDM paarlaamaa hin seennu jedhan